Ukuhlanzeka Museum. Izejwayezi ezimbi - "cha"!
Natural Science Museum of Ukuhlanzeka, owasungulwa ngo-1919 eSt, yasungulwa ngenhloso yemfundo impilo yabantu. Ngaleso sikhathi, abantu abavamile eRussia, ezingezona ezokwelapha akwenziwa uyazi izinyathelo ezidingekayo of nempilo yabantu, ukuhlukumeza zazo kungaholela ezifweni ezihlukahlukene ngokugcwele. Namuhla, ziphephile zayo futhi ukukhonza injongo ekhethekile ekunyusweni ukuphila ngendlela enempilo. Phela, ingabe ungakwazi ukuchaza kumuntu kulula ithonya elilimazayo imikhuba emibi emzimbeni kuka ku isibonelo sangempela?
Lezi izibonelo ezichaza kabanzi ezithathwe ngesimo ezihlukahlukene izithombe nemibukiso ukwahluka bahlangana ngaphansi kophahla Museum of Ukuhlanzeka. Petersburg bekulokhu idume progressiveness yayo, ngaphambi kwesikhathi. Lokhu Museum - omunye iwubufakazi balokho. Phela, liveza eminyakeni eyikhulu edlule, elalingelamaFilisti odokotela abadumile, ososayensi nodokotela ngesikhathi, noma akhiwa kubo, ngakho ngeso lengqondo yomuntu yesimanje, ukuthi abaningi babo give up noma iyiphi imikhuba emibi ngemuva kokuvakashela sikhungo.
Iningi ziphephile, ezihlinzekwa ukuze izivakashi Ukuhlanzeka Museum, anikezelwe nokuvinjelwa kwezifo ezihlukahlukene futhi siqu inhlanzeko umuntu. Kubaluleke ngokukhethekile ukuxhumana lolu lwazi ngayo esizukulwaneni esisha, ngakho Museum iminyaka eminingi iyindawo kumele ukuvakashela zesikole nabafundi. izinkambo School uphiwa cishe nsuku zonke, kodwa abantu abadala abafuna vakashela kule ndawo, futhi kuvame.
nemibukiso eminingi ungakwazi okwesabisa hhayi kuphela izingane, kodwa futhi abesifazane futhi amadoda. Ngokwesibonelo, situlo zamazinyo "ukhohlwe" eduze kwalo eminyakeni eyikhulu edlule bheka ngakho kwangethusa Imishini ukuthi ngokuzenzakalelayo ukugxilisa umkhuba ezinhle ukuxubha amazinyo okungenani kabili ngosuku.
Kodwa phakathi nemibukiso, okuvame ukubangela inhlangano abangekho ezimnandi, kukhona labo ezenza ukumamatheka. Ngokwesibonelo, plasticine izimpethu e onobuhle amazinyo womuntu noma amazinyo nge eyakhelwe ngamehlo adangele.
Okuningi ezithakazelisayo okungaphezu nje ukuvakashela i-Museum of Ukuhlanzeka, kodwa futhi ulalele umhlahlandlela abanolwazi, udokotela owazi konke, hhayi kuphela mayelana ziphephile, kodwa izifo eziningi, esibonisa kubo. Bhuka hambo, sicela ushayele. Ukuze amaqembu abantu abahlanu kuzobiza ruble 400 kuphela. ubude bayo - ncamashi ihora elilodwa. Kodwa uma ufuna ukuba azijwayeze ziphephile Museum, ungavakashela kunoma iyiphi phakathi nesonto kusukela 10.00 kuya 18,00. NgoMgqibelo Ukuhlanzeka Museum kuvula kwehora, kanye ngeSonto ivaliwe kuze kube iholidi ngaphambi. Izindleko amathikithi abadala (ngaphandle umhlahlandlela) - ruble 80, ithikithi zezingane - ruble angu-50.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Ukuhlanzeka Museum (Petersburg) - hhayi kuphela into efana nayo. emnyuziyamu okunjalo wadalwa 1927-1930 biennium. Dresden (Germany). Wabuye isasekhona namuhla futhi linikeza izivakashi zayo Umbukiso unomphela "Indoda - umzimba - impilo". Esikhathini esifanayo ngezikhathi pass isikhathi nezinye nemibukiso ekhethekile ngezihloko ezisematheni kusukela emkhakheni wezesayensi womuntu.
Kuphi ukuthola minigun e "GTA: San Andreas" futhi kanjani it nge ukukopela
Izidakamizwa "Sinuloks" (izinja). imfundo
Amalotha. Dlula ilungelo futhi shintsha yi
TRUS wendlala kanjani? ukulungiselela Kuyadingeka futhi incazelo inqubo
Umlando Russia: inkathi uPetru. Okusho, isiko Petrine inkathi. Art nezincwadi Petrine inkathi